I-Adama Traore Ubuntwaneni Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain I-Adama Traore Ubuntwaneni Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Julayi 2, 2020
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwayo ngegama elithi "Usain Bolt". Ibali lethu le-Adama Traore yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukusuka ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuvuka kwe-Adamu Traore. IiCredits Zemifanekiso: Ezimeleyo, EzemidlaloMole, Joe kwaye I-FC-Barcelona
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nokwakheka kwezihlunu kunye nesantya esimenza abe ngomnye wabadlali bebhola abakhawulezayo kwiFIFA nakwihlabathi. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abaqwalaselayo Adama TraoreI-biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguAdama Traoré Diarra. U-Adamu Traore njengoko ehlala ebizwa njalo wazalwa ngomhla we-25th kaJanuwari 1996 kunina, UFatoumata kunye noyise, uBaba Traoré kumasipala we-L'Hospitalet de Llobregat, kumazantsi-ntshona e-Barcelona. Ungunyana wesibini kunye nomntwana kubantwana abathathu abazelwe abazali bakhe abathandekayo aboniswe ngezantsi.
Dibana nabazali baka-Adamu Traore- Unina (uFatoumata) noYise (uBaba). Ikhredithi kwi-IG
Abazali baka-Adamu Traore ngabafuduki baseSpain abanemvelaphi / iintsapho zabo ezivela eMali, ilizwe elinomhlaba oselunxwemeni eNtshona Afrika. Ingcebiso nje… Ilizwe laseNtshona Melika iMali yenza malunga nesiqingatha seNtlango yeSahara kwaye lilizwe lesibhozo ngobukhulu e-Afrika.
Imephu ebonisa ilizwe laseMali- iAdna Traore yeMvelaphi yoSapho. Ityala lemifanekiso: EliseDelFile
Abazali baka-Adamu Traore balishiya ilizwe labo laseMali bayokuhlala e-Barcelona, ​​isixeko abakholelwa ukuba banokunika amathuba angcono abantwana babo. Sisigqibo esasihlawulayo.
Ukukhula, i-Adamu Traore ayifani nezinye iinkwenkwezi zebhola (umzekelo: ukuthanda kwe Gerard Pique, Mario Gotze kwaye Hugo Lloris) owayephila ubomi bokutyeba ngaphambi kokufika kwisardard. Wayevela kwimvelaphi yosapho olukumgangatho ophakathi, omnye onabazali bakhe Wayengakwazi ukuhlawula ingqokelela yeethoyi kuye njengomntwana, ibhola kuphela.
UAdna wakhulela ecaleni komntakwabo omdala uMoha kunye nodade othandekayo, uAsa kwikhaya elithanda ibhola. Ukuba ukhuliswe kwisixeko saseSpain saseBarcelona, ​​kwakuyinto yendalo kuye kunye nosapho lonke ukuba bathandane nomdlalo omnandi webhola ngokubonga kwiFC Barcelona.
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Uthando lomdlalo lwahlula eminye imidlalo njengoko uAdamu kunye nomntakwabo uMoh baqala ukutya ibala lebhola kumasimi aselumelwaneni e-CE L'Hospitalet. Kwakufutshane emva koko, bobabini baqala ukufumana imfundo yebhola ekhatywayo kwiZiko D'Esports L'Hospitalet, iklabhu apho bobabini benze inkqubela phambili entle.
UAdra Traore wafumana imfundo yakhe yokuqala kwibhola ekhatywayo yeEC L'Hospitalet Football Club. IiCredits Zemifanekiso: I-BBDFutbool,& NguJoe.
Kwangoko, bobabini abazalwana bayazi ukuba banetalente kwaye banokwenza into enkulu ebholeni. Kubazali babo nakumalungu osapho, Akuzange kubekho mathandabuzo amaninzi okuba uMoha noAdna babehamba ngendlela elungileyo. YayinguAdra Traore owaqhubela phambili ngokukhawuleza kunomntakwabo kuba wayenetalente ngakumbi.
Ngonyaka we-2004, iphupha losapho lakwaTraore lihlawule. Umhlohli weFC Barcelona odumileyo uLa Masia umeme uAdam ngeemvavanyo. Umninawa wakhe uMoh wamenywa ngummelwane I-Espanyol kwiminyaka emibini kamva.
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
Emva kwethuba elifutshane kunye nommelwane we-CE L'Hospitalet, ulingo oluphumeleleyo lwabona u-Adamu Traoré ejoyina iFC Barcelona eyaziwayo ye-academy La Masia kwi-2004 eneminyaka eyi-8.
Ubomi bokuqala bo-Adamu Traore kunye neLa Masia- FC Barcelona Academy. Ityala lemifanekiso: Joe
Emva ngelo xesha nangoku, yayiyiphupha lomntwana ngamnye lokujoyina iLa Masia, enye yezona zifundo zibalaseleyo ngebhola ekhatywayo kwihlabathi. Ukujoyina kwakumnandi kuAdam omncinci. Ukudibana nokhuphiswano olomeleleyo, kuye kwafuneka enze amadini amaninzi njengeentsuku zokuzalwa ezingekhoyo nezinto awayekhangele phambili kuzo ekhaya. Zonke ezi zinto zokwenza amadini zazifuneka ukuze akwazi ukubonakalisa iklabhu.
Ubusazi?… Unyaka (i-2004) uAdama ajoyine ngawo La Masia ungqinelana nonyaka Lionel Messi kuqhume kwindawo yemidlalo yebhola ekhatywayo. Emva ngelo xesha, uAdam kunye nabanye abantwana bonke balandela emanyathelweni eqhawe labo lobuntwana u-AKA I-La Pulga (i-GOAT).
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Ezantsi kwendlela kunye noLa Masia, u-Adamu wayeqhubeka nokubonisa inkqubela njengoko ehamba kwiinqanaba lezifundo. Ngaphandle kokuba mfutshane, amandla akhe, amandla kunye nesantya sombane kumenze waduma kwinqanaba lolutsha. Ubusazi? UAdra Traore wafumana igama lesidlaliso 'Usain Bolt'ngenxa yesantya sokudubula kwakhe ngexesha leminyaka yokuma kwakhe e-Barcelona La Masia i sikolo.
UAdra Traore wadlala ecaleni kwabachasi badala kunaye kwaye mkhulu kunaye. Ityala kwi I-FC-Barcelona
Kuba ulungile, uAdam wayesoloko esetyenziswa ngokuchasene nabachasi bamaqela aphezulu iminyaka kwaye ukhule ngokuchasene nabadlali abadala kunaye. Wayesetyenziselwa zombini njenge-right-back kunye nehlaseli ngexesha leentsuku zakhe eLa Masia.
Ngelixa abanye abantwana behluthwe kukhuphiswano oluphezulu lweLa Masia ngenxa yokungasebenzi kakuhle, uAdra Traore wayengekho njengoko wayelungile ekwenzeni umsebenzi wakhe. Apha ngezantsi kukho isiqwenga sobungqina bevidiyo esibonisa imiboniso bhanyabhanya obumangalisayo ngexesha lakhe eLa Masia. Ityala elikhethekileyo kwi-AirFutbol.
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
Ngonyaka we-2013, u-Adamu Traore waba rhoqo kunye neBarcelona B, ekhwela ngaphezulu kwe-40 yeligi ebonakalayo kwicala. Wayenegalelo ekuncedeni iqela leBarc B ekuzuzeni i-2014 ye-EFA yolutsha.
UAdra Traore ubhiyozela i-UEFA yoLutsha kunye neqela labadlali. Ityala lemifanekiso: Izithethi zeTalkSports
Kwakuloo nyaka, u-Adamu wenza i-debut yakhe yobungcali kunye neqela le-FC Barcelona ephezulu njengoko ethathe indawo Neymar kwimpumelelo yeLa Liga. Ngenxa yokusebenza kwakhe okubonakalayo kwiqela leFC iB FC kunye nokuqala kweqela eliphambili, iiklabhu kulo lonke elaseYurophu zeza emva kokusayina kwakhe.
Kwi-14 ka-Agasti 2015, uAdra Traoré wajoyina iklabhu yePremier League iAston Villa kunye nonyaka emva koko, uMiddlesbrough apho aqhubeka nokusebenzisa khona ukuhamba ukwenza iingxaki ezininzi kubakhuseli abachasayo. Impumelelo kwezemidlalo ye-Adamu Traore kunye neBoro yeza xa yayidumile amaqhinga omnqwazi ibhaso eli; "(1) Umdlali weMiddlesbrough's Fans 'Wonyaka, (2) uMdlali oMncinci woNyaka weMiddlesbrough's kunye (3) Umdlali weBadlali bakaMiddlesbrough.
UAdra Traore ucofa enye yeBhaso lakhe iMiddlesbrough. Ityala kwi I-Middlesbrough Website yeWebhusayithi
Impumelelo yeAdra Traoré eMiddlesbrough yatsalela iWolverhampton Wanderers engakhange imqhaphu xa imthenga. Umqeqeshi wakhe, UNuno Espírito Santo wafumana impumelelo ye-tremendoius kwinjongo yakhe yokusebenzisa isantya namandla akhe ngokusebenzisa izixhobo zokuhlasela ukohlwaya imilenze ediniweyo yeqela eliphikisayo.
I-Adamu Traore- Isetyenziswe njengokuphela kwesixhobo somdlalo ukohlwaya abaphikisi abadiniweyo
Kwinqaku elikhumbulekayo, isantya kunye namandla eAddra Traore aye acofa kakhulu kwi-6th ka-Oktobha 2019. Yayilusuku uAdam awangqinga ngalo Pep Guardiola'Iqela elinzima leMan City njengoko lifumene amanqaku amabini kuphumelela kude (i-0-2), i-feat eyona nto ibaluleke kakhulu kwimisebenzi yakhe yobuchule.
Usuku uAdam Traore wohlwaya iMan City. Ityala kwi 90Min
Ngoku ngaphandle kwamathandabuzo, i-Adamu yenze abalandeli bebhola bekholelwa ukuba isantya namandla yenye yeemfuno eziphambili njengomgcini webhola wanamhlanje. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe ukuba nodumo kunye nokuthandwa ngakumbi kwiFIFA, abalandeli abaninzi baye bacinga ngokwazi ukuba uAdra Traore unentombi okanye unkosikazi. Ngaphandle kwamathandabuzo, umzimba wakhe kunye nokubonakala okuhle ngokuqinisekileyo kuya kumenza abe kuluhlu lomnqweno wesithandwa sabaninzi abalandeli basetyhini.
Ngubani iAdra Traore Girl Girl? Ikhredithi kwi-IG
Njengakwixesha lokubhalwa, sifumanise ukuba akukho bume bendawo yokuba nentombazana engu-Intombazana okanye ukubandakanyeka kulo naluphi na ulwalamano. Ukusuka kwinto ebonakalayo, ukhetha ukugxila kwibhola yakhe yebhola. Nangona kunjalo, sibona uninzi lwabadlali bebhola abancinci abaziphatha ngale ndlela ukuze bahlale bephantsi ngezigaba ezibalulekileyo zomsebenzi wabo. Kungenzeka kwakhona ukuba u-Adamu unentombi yakhe kodwa ukhetha ukungabenzi ubudlelwane bakhe naye esidlangalaleni okwangoku.
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bomntu
Ukwazi ngobomi ba-Adamu Traore buqu ngaphandle kwesandi kunokukunceda ube nomfanekiso ngqondweni wakhe. Ukuqala, ukuqala kokujonga iAdam, ungabona ukuqala kwento enamandla kwaye enesiphithiphithi. Ngaphandle kwephawundi, uhlawula ingqalelo ekhethekileyo ekusebenzeni kwakhe nomthambo, esona sizathu sobunzima bemisipha kunye nomzimba.
Ngo dliwano ndlebe IbhantiU-Adamu wabanga okwahlukileyo, ukuba akangomntu ophakamisa ubunzima. Ngamazwi akhe; Andikhuphulanga ubunzima. Ndiyazi ukuba abantu abayi kuyikholelwa loo nto, kodwa iyinyani. ”. Umbuzo ngulo; Do wena ofunda eli nqaku uyakholelwa kwinto awayeyithetha nangona umjonga lo mfanekiso njengebhola ekhatywayo oneminyaka eyi-17?…
Ifoto ka-Adamu Traore njengomdlali webhola we-17 oneminyaka engama-ubudala. Ityala lemifanekiso: I-Trollfootball
Okwesibini kubomi bakhe bobuqu, u-Adamu Traore ngumntu osoloko enento yokubonelela ngehlabathi kwaye ayikho enye into ngaphandle kwa "isantyaUzisa kumdlalo webhola. Ungangabi kwinqanaba Messi kwaye C Ronaldo, kodwa uAdra Traore udale owakhe umhlaba wobukhulu njengoko ubonwe ngaphakathi Amabhaso eFIFA18. Ubungqina bevidiyo (ngezantsi).
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi Bentsapho
Inani elipheleleyo labantu abafudukayo abama-55,000 baseMelika abahlala eSpain (Iingxelo zeEfe), usapho lakwa-Adamu Traore luphakathi kwabambalwa abaphumeleleyo abazenzele igama. Intsapho iyabongwa Ukudala indlela yabo eya kwinkululeko yezemali besebenzisa ibhola njengeyona ndlela.
UAdna Traore Utata: Utata wakhe obizwa ngegama lesidlaliso "HagUngumntu aziwa njengoMaliyali ngenkcubeko. Xa ujonga uBawo oboniswe ngezantsi nonyana wakhe, inye into eza engqondweni. Ngumzimba womzimba katata nonyana. (ezo misipha ziyakha!). Unokugqiba ngokulula ukuba uAdam uthathe emva kotata wakhe ekwakheni umzimba wakhe.
U-Adamu Traore uvela notata. Ityala: IG
UBawo njengotata abaninzi abalungileyo waba negalelo ekuboneleleni ngenkxaso kuAdna ngelixa wayekumzi-mveliso weCatalonia webhola.
Umama ka-Adamu Traore: UFatoumata ligama lakhe kwaye uhlala ebizwa ngokuba 'i-mum exhasayo'. Ngokwonyana wakhe u-Adamu; "Umama wam ebesoloko endixhasa, endiqhuba naphi na kwaye endikhangela njengomdlali wolutsha. Wayelapho nam, endibonisa inkxaso, ngala mhla ndatyikitya ngayo iiLves. "
UAdna Traore nonina. Ityala: IG
Ukujonga kumfanekiso wabo ongentla, unokuxelela ukuba uthando luthanda phakathi kuka-Adamu noFatoumata, olugqitha konke ukuthanda kweentliziyo zabo.
Udadewabo ka-Adamu Traore: Apha ngezantsi kukho udadewabo ongumntwana ogama linguAsa. Ngexesha lokubhalwa, uhlala eSpain kwaye uhlala etyelela umntakwabo omkhulu eNgilane.
UAdra Traore uvela nodadewabo uAsa. Ityala: IG
Umninawa ka-Adamu Traore: U-Mohamed Traoré Diarra owaziwa ngegama lesidlaliso "MohaNgumkhuluwa ka-Adamu. U-Moha (owazalwa ngo-29th ngo-Novemba 1994) oneminyaka emibini emdala kuno-Adamu naye waba yibhola ekhatywayo.
Dibana nomntakwaboAdra Traore- Moha. Ityala lemifanekiso: Nkistra. Ikhredithi kwi-IG
Njengendlela yokuhlawula ngokunyaniseka kwiingcambu zentsapho yakhe, uMoha kwi-17th kaFebruwari 2014 switch from play for Spain to play for Mali. Ngexesha lokubhalwa, okwangoku udlala njengobungaphambili kwiklabhu yaseSpain kwiqela leSegunda División B elikwinqanaba lesithathu lenkqubo yeligi yebhola ekhatywayo yaseSpain.
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - yokuPhila
Kwibhola ekhatywayo I-2.6 yezigidi zeerandi (i-2.2 Million Pound) ngonyaka ngexesha lokubhalwa, kukho imali eyaneleyo ngobomi obuqhelekileyo. Impumelelo yezemali ka-Adamu Traore ibotshelwe ngqo ekusebenzeni kwakhe njengomdlali webhola.
Ukwenza iimali ezininzi ayigqithisi kubomi bokungaqhelekanga obuphawuleka ngokulula ngabadlali ababonisa iindawo ezinkulu ezinemoto kunye neemoto ezinombala. UAdam Ubulumko malunga nendlela alawula ngayo imali yakhe. Uqhuba imoto e-avareji kwaye uphila ubomi obumiselweyo bomdlali webhola.
Iinyani zoQeqeshiso lweNdalo zika-Adamu. IiCredits zoMfanekiso: I-CNBC, IG kunye neShishini laseArabia. Ityala kwi-Twitter
Iinyani zeAna Traore zoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Oyena mama ubekekileyo kwiKhondo lakhe NgoJanuwari 2016 urekhodwa njengelona xesha elibi kakhulu ebomini bakhe. Ubusazi?… U-Adamu Traore wehlisiwe kwiqela eliphakamileyo le-Aston Villa ngenxa yezihlandlo eziphindaphindiweyo zokungafakwanga. Esi sigqibo saba nefuthe elibi kwiqela lakhe njengoko icala lakhe lalihluthwe ukusuka kwindiza ephezulu yesiNgesi ekupheleni kwelo xesha.
Une-CV elungileyo: Uninzi lwebhola elidumileyo lafika kwiAdama Traore ngelixa lidlala iFIFA kwaye kunjalo, Iingcuka. Inyani yile, umdlali webhola okhawulezayo nonamandla uye weza umgama omde njengoko ebonwa kwi-CV yakhe athetha ngayo.
I-Adamu Traore Untold Inani leeMbasa eziHloniphekileyo.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda iNdaba yethu yeAna Traore yoBuntwana kunye neNqaku leMbali yoBomi. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
Ibhola leBhola laseBelenca
I-Ferran Torres Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology leNqaku
I-Marcos Llorente Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Ibali leMariano Diaz yobuntwana kunye neNqaku leMbiniso yoBuntu bukaMariano
UDaniel Parejo Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Rodrigo Moreno Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Rodrigo Hernandez Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
Iker Casillas Ibali leNgcaciso yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UGerard Deulofeu Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBriography Facts
I-Paco Alcacer Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali leNgcaciso yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Ayoze Perez Ibuntwaneni Ibali Plus Untold Biography Facts